Phaka, Thengisa, futhi Uxhumane neFormstack Launch Pad | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 23, 2012 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 Douglas Karr
Enye yezinto ezinhle ngokuba yisikhungo sokumaketha nokusebenza Martech Zone ngukuthi empeleni sisebenzisa amathuluzi amaklayenti ethu namasayithi ethu namasayithi amaklayenti ethu. I-Formstack bebengabangane selokhu basungulwa… empeleni bengakaqali. Ngibe nenjabulo yokusebenza nomunye wabasunguli eminyakeni eyishumi eyedlule futhi ngathanda ukumbona egxuma umkhumbi evela kwabezindaba bendabuko kanye nokuqalisa I-Formstack.
IFormstack manje isikhulele ku- ngaphezu kwabasebenzisi abayi-100,000! Futhi siziqhenya ngokumangalisayo ngokuba nabo njengomxhasi weMartech.
Kunabanye abakhi bamafomu laphaya futhi kukhona abakhi bamafomu abaphathelene namapulatifomu athile. I-Formstack uqophe ingxenye enkulu yemakethe ngoba bangabathengisi beqiniso nabapulatifomu be-agnostic. Enye yezinkinobho ezaziwa kancane ze I-Formstack Impumelelo, nokho, ukuthi benze umsebenzi omuhle ekwakheni ukuhlanganiswa okukhiqizwayo namanye amapulatifomu. Uhlu luyamangalisa… futhi manje I-Formstack ukhiphe i-beta ipulatifomu eyengeziwe ebizwa ngokuthi Hola Pad.
I-Launch Pad entsha kaFormstack yipulatifomu ehlanganisiwe yamafomu aku-inthanethi, amakhasi e-web, izitolo ze-e-commerce, namathuluzi wokumaketha nge-imeyili, enzelwe ukuthatha ibhizinisi lakho elincane liye ezingeni elilandelayo. Kuyindawo yezinhlelo zokusebenza zewebhu ezenziwe lula ezizokwenza ukuqhuba ibhizinisi lakho kube lula kakhulu. Nayi indaba yomsebenzisi enhle leyo I-Formstack isungule ukuchaza iLaunch Pad:
U-Oliver unesitolo sendawo esidayisa ezentengiselwano futhi unentshisekelo enkulu I-Formstack umsebenzisi ufuna ukwandisa ukutholakala kwebhizinisi lakhe elincane online. Landela indaba yokuthi wasebenzisa kanjani I-Formstack I-Launch Pad yokuyisa ibhizinisi layo ezingeni elilandelayo.
Sebenzisa - U-Oliver wasebenzisa ithuluzi lePage ukudala ngokushesha ubukhona bewebhu obuphakathi lapho izivakashi zingafinyelela khona ulwazi mayelana nebhizinisi lakhe kanye nesixhumanisi sesitolo sangaphambili sakhe. U-Oliver ukwazile ukwenza ngokwezifiso ikhasi lakhe ukufanisa imibala nokuzizwa komkhiqizo wakhe.
Thengisa - Kusuka ekhasini lika-Oliver, abathengi bangafinyelela kuwo wonke umkhiqizo wabo abanikela ngawo ngethuluzi lezitolo. Usebenzisa leli thuluzi, u-Oliver usethe amakhasi ngamanye womkhiqizo wakhe ngamunye, avumela abasebenzisi ukuthi babhekabheke futhi bafake ama-oda ngokushesha.
Khulumisana - Ngemuva kokuqoqa amakheli e-imeyili wamakhasimende, u-Oliver wayefuna ukubazisa ngokuthengisa nangemicimbi ezayo. Usebenzise iLaunch Pad ukudala imikhankaso ye-imeyili eyenziwe ngokwezifiso egqamisa lezi zinto, ikhuthaza abalandeli bayo abasha ukuthi babuyele esitolo, esitolo noma ku-inthanethi.
With I-Formstack 's Launch Pad, uyakwazi ukuqala (noma ukuthuthukisa) imizamo yakho yokumaketha endaweni eyodwa. Kulula ukuphatha, kuthatha isikhathi esincane ukuqala, futhi ngaphezu kwakho konke, kukuvumela ukuthi ubuyele kulokho ofuna ukukwenza. Qala isilingo samahhala se-Launch Pad namuhla… okubhaliselwe okunguchwepheshe kungama- $ 29 kuphela ngenyanga!
Tags: bamba idathaukuqoqa idathaukuthwebula idathai-formstackhlanganisa i-ecommerceukwethula iphedi